फुर्सद Archives - Page 62 of 64 -
सिडी विजयलाई सहयोग गरौं
भ्वाइस अफ नेपाल गायन विधाको रियालिटी सोमा पोखराका सिडी विजय अधिकारी सेमी फाइनल पुगेका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनबाट शनिबार र आइतबार बेलुका प्रसारण हुने सोमा लोकगीत तथा आधुनिक गीतमा उत्कृष्त क्षमता प्रदर्शन गर्दै उनी सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् । सिडी विजय अधिकारी सहयोग समिति पोखराका संयोजक पद्मराज ढकालले कला र गलाको सम्मानमा अधिकारीलाई भोट दिएर सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । २ सय भन्दा बढी गीतमा स्वर दिइसकेका अधिकारी… पुरा पढौ
नायिका सोनालीको क्यान्सर उपचार
बलिउडका प्रख्यात कलाकार सोनाली बेन्ड्रे अमेरिकमा क्यान्सरको उपचारपछि घर फकिएकी छन् । उनी सोमबार विहान सबेरै मुम्बाई फर्किएकी हुन् । सोनालीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधारपछि न्युर्योकबाट मुम्बाई फर्र्र्किएको उनका श्रीमान् गोल्डी बेहलले बताए । सोनालीको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएको र अव थप उपचारको लागि न्युर्योक जानु नपर्ने बेहलको भनाइ छ । अव सोनालीको उपचार पूरा भएको र अब उनी पूर्णरुपमा स्वास्थ्य भएकी बेहलले बताए । अरु विरामीले जस्तो उनको पनि नियमित… पुरा पढौ
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा महोत्सव
हिउँदे ठिही सुरु भएको छ । पोखरा उपत्यकामै यस्तो ठिही हुँदा हिमाली भेगको जीवन कस्तो होला ? मानिस र त्यहाँका जीवजन्तु कसरी बाच्छन् ? हिउँ कति जम्छ ? पोखराबाट हिमाल हेर्ने धेरैले यस्तो सोच्छन् । तर, यसको उत्तर त्यति बेला भेट्दैनन् । यी र यस्ता हिमाल, हिमाली जनजीवन र पर्वतारोहणबारे यथेष्ट जानकारी हत्तपत्त पाइँदैन । हिमाल र पर्वतारोहणबारे जानकारी दिन र पर्यटन पर्वद्धन गर्न पोखरा १७ को अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयमा… पुरा पढौ
सडक महोत्सव पुस १३ देखि
सडक महोत्सव पुस १३ देखि १७ गतेसम्म फेवाताल किनारमा हुने भएको छ । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा हरेक वर्ष हुने सडक महोत्सव यस वर्ष पनि विविध गतिविधिका साथ हुनलागेको रेस्टुरेण्ट एण्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान) ले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको हो । पोखराको पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण मानिदै आएको सडक महोत्सव २० औँ संस्करणस्वरुप अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०१९ को स्वागतार्थ आयोजना गरिन लागेको रेवानका अध्यक्ष बुधराज भुजेलले (भीमसेन)… पुरा पढौ
इक्यान शैक्षिक मेला तयारी धमाधम
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्कीले आयोजना गरेको छैटौं संस्करणको ‘इक्यान शैक्षिक मेला’को तयारी तीव्र बनाइएको छ । यही मंसिर २६ देखि २८ गतेसम्म पोखरा सभागृह हलमा हुने मेला सफल पार्न तयारी थालिएको इक्यान कास्की अध्यक्ष भुवन क्षेत्रीले बताए । यस पटकको इक्यान शैक्षिक मेला ब्रिटिस काउन्सिलको प्रस्तुतिमा हुँदै छ । क्षेत्रीले भने, ‘अन्य प्रायोजकसँग पनि सहकार्य हुने क्रम जारी छ ।’ टाइटल स्पोन्सरमा अस्ट्रेलियास्थित सिड्नी सिटी कलेज अफ म्यानेजमेन्टले… पुरा पढौ
हिमालको चौँरी एक्सपो पोखरामा
चौँरी हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ । हिमालतिर नउक्लेकाहरुले चौँरी देख्ने कुृरै भएन । तर, अवसर न हो १ हिमाली क्षेत्रमा पाइने चौँरी यतिबेला पोखरा झरेको छ । माथि जाडो भएर हैन, पोखराको नयाँबजारमा जारी ‘सफल एक्सपो पोखरा साथमा तेस्रो मोवाइल मेला २०७५’को अवसरमा चौँरी नदेखेका पोखरेलीलाई हिमाली जनावरबारे जानकारी दिन चौरी पोखरा झारिएको हो । ‘हामीले राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको परिस्कृत रुपमा आयोजना गरिएको एक्सपोमा नयाँपन दिन चौँरी पनि पोखरा झारेका… पुरा पढौ
‘२.०’ मा ऐश्वर्या नअट्नुको राज यस्तो छ
चलचित्र ‘२.०’ नोभेम्बर २९ बाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ । यो रजनीकान्तको सुपरहिट फिल्म ‘रोबोट’ को सिक्वेल हो । रोबोटमा अभिनेत्री ऐश्वर्या रायको पनि लिड रोल थियो । यो जोडीलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए । तर, फिल्मको सिक्वेलमा भने ऐश्वर्या अटाइनन् । फिल्ममा अक्षय नेगेटिभ भूमिकामा छन् । एमी ज्याक्सनले अभिनेत्रीको भूमिका निभाएकी छिन् । निर्देशक एस शंकरले फिल्ममा अभिनेत्री ऐश्वर्या नहुनुको कारण खोलेका छन् । उनी भन्छन्, ‘‘२.०’ को… पुरा पढौ
कहिल्यै स्क्रिप्ट पढिनँ : सनी देओल
’घातक’, ’जीत’, बोर्डर’, ’गदर’ जस्ता सुपरहिट फिल्म खेलेका अभिनेता सनी देओल अनौठो स्वभावका छन् । गएको ३५ वर्षदेखि बलिउडमा काम गरिरहेका छन् उनले अहिलेसम्म फिल्मको स्क्रिप्न नै नपढी काम गर्ने गरेका छन् । उनी अभिनीत नयाँ फिल्म ‘भैयाजी सुपरहिट’ अहिले प्रदर्शन भइरहेको छ । कहिल्यै स्क्रिप्ट आफै नपढ्ने उनी खासमा लेखक र निर्देशकबाट कथा सुन्न रुचाउँछन् । उनले भने, ‘म एक आइडिया सुन्छु र त्यसैको बारेमा सोच्छु । यदि मलाई… पुरा पढौ
बुटवलमा ‘पेजेन्ट नेपाल बुटवल फेसन शो’
प्रदेश ५को राजधानी बुटवलमा पहिलो पटक फेसन शो कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । पेजेन्ट नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मौलिक सांस्कृतिक तथा आधुनिक फेसनलाई समेटेर शो देखाईएको थियो । बुटवलको मिलन चोक स्थित एसियन भिलेज रिसोर्टमा आयोजना भएको उक्त फेशन शो को लागी अडिसन राउण्डबाट छनौट भएका ४५ जना महिला तथा पुरुष मोडलहरु बिभिन्न थिममा र्याम्पमा उत्रिएका थिए ।एकहप्ता सम्मको प्रशिक्षण पश्चात मोडलहरुलाइ र्याम्प वाक सम्बन्धि विविध जानकारी प्रदान… पुरा पढौ